Dzese nhau dzeIOS 9 beta 2 | IPhone nhau
Nhau dzese muIOS 9 beta 2
Anopfuura maawa gumi nemaviri apfuura kubva pakatangwa iyo wechipiri beta yeIOS 9 uye iwe unotoziva zvirinani zvese zvitsva zvinounza pasi peruoko rwako. Ichokwadi kuti isu tichiri kukwanisa kuwana dzimwe nhau asi, kana zvirizvo, handifunge kuti inyaya dzakanyanya kukosha Zvikasadaro, tingadai takatovawana. Pakati pezvinhu zvese zvitsva, iyo nyowani ficha inozobvisa maapplication otomatiki kuwana nzvimbo yekuvandudza kune iyo nyowani vhezheni.
Pazasi isu tinodonongodza dzese nhau dzakawanikwa muIOS 9 beta 2:
1 Otomatiki uninstall yezvishandiso
2 Nyowani podcasts icon
3 Iyo Apple Watch application yakatumidzwa zita kungo tarisa
4 Kuvandudzwa kwekutsvaga
5 Yakagadziridzwa Yakaderera Simba Mode Tsananguro
6 Kushandisa bhatiri kwakavandudzwa?
7 Nhau app yakawedzerwa kuICloud
8 Marongero eSafari
9 Kugadziriswa kune iyo keyboard keyboard
10 Yakagadzirisa nyaya ine ziviso yeMail
11 Handsoff inowanikwa musarudzo yekushandisa
12 Bhatani rekudzokera kuchishandiso chekare (Dzokera ku «application») rava muchiSpanish
13 Iye zvino hatigoni kuona chero chinhu kubva kuApple Music
14 Ruzivo rwekuvandudza rwakatotaridza nemazvo
15 Kuvandudzwa kwekuita
Otomatiki uninstall yezvishandiso
Kana isu tiine chishandiso chakazara kwazvo, dzimwe nguva panenge pasina nzvimbo yekugadzirisa. Zvino, iOS 9 ichatibvunza kana isu tichida kubvisa zvimwe zvinoshandiswa kuti tiite iyo yekuvandudza. Iko kunyorera kuchadzorerwa mushure mekupedza kuita kwese.
Nyowani podcasts icon
Shanduko yacho inenge isingabvumike kune ziso rakashama, asi iyo icon nyowani ikozvino yakamira zvakanyanya pane iko kumba skrini.
Iyo Apple Watch application yakatumidzwa zita kungo tarisa
Mune shanduro dzeIOS 8 uye mune yekutanga beta yeIOS 9, iko kunyorera kweApple Watch kwakadaidzwa zvakafanana neiyo smartwatch. Icho chinhu chakashanduka uye zvine musoro: kune rumwe rutivi, zita racho ipfupi uye rinotaridzika zviri nani pane iyo inotenderera. Kune rimwe divi, wachi yeApple inonzi Apple Watch, ichokwadi, asi izwi rekuti "Apple" rinofanira kutsiviwa nechiratidzo chayo, icho chingaisiya mu Watch, senge Pay uye Music (kana iwe ukaona isingazivikanwe icon , imhaka yekuti hausi kuverenga ichi chinyorwa neApple chishandiso). Ini ndinofunga zvine hungwaru kusaisa chiratidzo pane iyo iOS imba chidzitiro.
Tsvagurudzo, iyo "in situ" inoti "Tsvaga" asi kana tikateerera masetingi ichadaidzwa kuti "Tsvaga", yakagadziridzwa zvakanyanya mubeta repiri. Izvo zvinoshanda zvirinani zvirinani uye zvikumbiro zvakakurudzirwa izvozvi zvinoita kunge zvine chekuita nezvatinoda. Ukangoshandisa mudziyo zvishoma, «Tsvaga» ichatipa izvo zvimisikidzo zvatichangobva kuvhura, zvinoreva kuti zvinodzidza kubva kumaitiro edu kuratidza mhedzisiro. Mukuwedzera, iwe unogona ikozvino kutsvaga mukati memamwe akawanda mafomu.
Yakagadziridzwa Yakaderera Simba Mode Tsananguro
Tsananguro yakapihwa mune Yakadzika Simba Mamodhi maseteni akachinjwa. Mune ino kesi, iyo inopa rumwe ruzivo kudzivirira kusavhiringidzika ndinofungidzira. Zvaitaridzika kwandiri kuti zvaive pachena kare, asi zvinoita sekunge Apple yaisada tsananguro yayo.
Kushandisa bhatiri kwakavandudzwa?
Ndiri kucherechedza kuti kunwa hakuna kunyanyisa sekare uye handisi ndega. Pane zvakawanda zvakataurwa nevanhu vanoti bhatiri rinogara kwenguva refu, asi iyi inyaya inosiyana zvakanyanya. Neshanduro imwe neimwe nyowani, kunwa chinhu chinoshanduka, asi kune vamwe chiri nani, kune vamwe chakanyanya.
Nhau app yakawedzerwa kuICloud
Parizvino haisi kuwanikwa kunze kweUS. Ichi chitsva chichatibvumidza kuyananisa nhau dzakagadzirirwa pakati pezvigadzirwa, kuitira kuti tigova nemagazini imwechete pazvinhu zvese Nhau dzinoverengwa, dzakamirira kana zvakafanana mabasa anogona zvakare kuwiriraniswa nenzira imwecheteyo seRSS vatengi.
Marongero eSafari achinja. Sarudzo yekuvharira zvemukati, iyo inotarisirwa kuonekwazve mune ramangwana betas, yabviswa uye sarudzo yekuratidza kana kuviga bhawa rezvido yakawedzerwa.
Kugadziriswa kune iyo keyboard keyboard
Iyo yekucheka uye yekunamatira sarudzo dzakapa nzira kune maviri matsva ekugadzirisa uyezve kuita mabhodhi. Shanduko yakanaka chaizvo, nekuti kana tikasarudza zvinyorwa, mabhatani aive aripo (cheka nekuteedzera) anodzokera kunzvimbo yawo, saka tine mabhatani mashanu munzvimbo ye 5. Bhatani rekunamatira rinogara richioneka.
Yakagadzirisa nyaya ine ziviso yeMail
Kukundikana kwakagara kuchiitika netsamba ndekwekuti kuzivisa kuti isu taive neemail hakuna kuverengwa, kunyangwe mushure mekuverenga vese. Dzimwe nguva, achipinda uye achizorodza kakawanda, chibharuma chitsvuku chaizonyangarika, asi paisambove nerombo rakanaka.
Handsoff inowanikwa musarudzo yekushandisa
Iye zvino iyo Continuity Handsoff sarudzo inowanikwa zvekare, chitsva chakaunzwa muna Chikumi 2014 uye icho chinotibvumidza isu kuti titange basa nechimwe chishandiso uye nekuenderera mberi icho nechimwe. Mu beta 1 yeIOS 9, chimiro ichi chaisawanikwa.
Bhatani rekudzokera kuchishandiso chekare (Dzokera ku «application») rava muchiSpanish
Chinhu chinoratidzika kupusa asi, kana uchinge waedzwa, hauzodi kuzvibvisa. Izvi "Dzokera ku ...", izvo zvinotibvumidza kuti tidzokere kuchikumbiro chekare kana chakatitumira kune imwe. Semuenzaniso, tinogamuchira email ine chinongedzo, tinoibata uye Safari inovhura. MuSafari tichaona «Dzokera kuMail».
Iye zvino hatigoni kuona chero chinhu kubva kuApple Music
Kwete kuti iyi inyaya yakanaka kana yakaipa, asi tisati tatarisa Beats 1 uye kunyange kutsvaga maredhiyo. Mune zvimwe zviito taigona kuona sarudzo dzekunyora, asi hapana chakashanda. Mune maonero angu, zvese chikamu chekushambadzira.
Ruzivo rwekuvandudza rwakatotaridza nemazvo
Mune vhezheni 1 yeIOS 9, kana uchipinda mune yekuvandudza tebhu yeApp Store, ruzivo rwunoisa chimwe chinhu senge (ini ndinonyora kubva mundangariro) "INFO_CELL" uye chimwewo chinhu. Yakanga iri tsikidzi iyo, pachinzvimbo chekuratidzira iyo vhezheni yeapp uye "Nhau" ichitipa mukana wekuratidzira menyu, yakatiratidza zvisiri izvo.
Kuita chinhu chinoda kugadzirisa beta mushure me beta. Iko kune yekuwedzera kuyerera, asi kwete zvakanyanya sezvo yekutanga beta yanga isina kushata zvachose. Iko kunoonekwa kuri mukupindura kwebhatani rekutanga. Isati yatora chinguva iyo, kunyangwe yaive diki, yaiita senge isingaperi kwandiri nekuti handisati ndajaira. Zvino Mhinduro yeImba yatogamuchirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Nhau dzese muIOS 9 beta 2
Bhatiri rakadhakwa !!! zvirinani pane yangu iPhone 6 Plus
Mavara ari pa keyboard anova makuru. Izvi senge rapfuura beta rakaedzwa pane yangu iPhone 6
Ndekupi kwaunoona iyo yakaderera nzira yekushandisa? nekuti ini handina muZvirongwa / Bhatiri…. ? iPad Mhepo 2
Alex Lopez Ruiz akadaro
Pindura kuna Alex Lopez Ruiz
Rafael Perez (@ rafhpe13) akadaro
Chinyorwa chakanakisa, kana dziri tsamba kana dzikakura kana dzadzvanywa, mune zvigadziriso iwe unowana sarudzo yekumisikidza kana kuimisa, zvinoenderana nekuravira kwedu. Dambudziko mune yangu kesi nderekuti kana iko kushanda kuchiitwa kiyibhodhi mune dzakawanda kesi dzinoedza kunamatira uye kushanda zvishoma zvishoma.
Pindura kuna Rafael Perez (@ rafhpe13)
Mhoro Rafael. Ndiri kufarira kujekesa izvi kwandiri, nekuti ini handioni sarudzo. MuGIF yandinowedzera (iyo isingafanire kumira, ndichaona kana ndikaigadzirisa) unogona kuona kuti kana wabata tsamba, iyo keyboard haina "kusvetuka". Handireve mavara makuru, asi tsamba iri pa iPhone inova hombe. Ini ndasimbisa kuti izvi zvinoitika kana tichiisa password, nekuti mumapassword tinoona madonhwe (kana maasterisks)
Pablo, tarisa mune Zvirongwa -> Khibhodi uye shandisa «Ratidziro mavara".
Hongu, ndinokutendaiwo, Bermalop. Iyo ndeimwe yeaya maratidziro ausingambo tarise nekuti hauna kumbobvira waida uye, chokwadi, ini ndaisaziva kuti yaivepo. Asi ini ndakaremara mune yekuvandudza, beta zvinhu. Shuwiro yakanakisa.
Josua gonzalez akadaro
Sarudzo yekumisa kana kumisikidza kuburitswa kwetsamba iri muzvirongwa / zvakajairika / keyboard uye ndiyo sarudzo yekutarisa mavara. Unosarudza kana tsamba yaunodzvanya yakamiswa kana kwete.
Pindura Josua Gonzalez
Zvakanaka, yanga yadzimwa uye chiri chinhu chandisina kumbobata mumakore ese andinoshandisa iPhone. Ini ndinoibvisa kubva pakurongwa 😉
Iye zvino muIOS9 unogona kutotarisa mavhidhiyo emimhanzi muapp yemumhanzi zvese zviri kumusoro uye zvakatwasuka
Panguva ipi apo iro rakashata "tsvaga" bhatani munzvimbo yekudzora ????
Ndatenda zvikuru nekupindura! Nezve iyo keyboard zvakare: Kana ichireva kutarisa kwekutanga kwemavara, senge A yeActualidad iphone, kana sarudzo iyi ikaonekwa mune-masisitimu-general-keyboard-hunhu preview; yakaitwa uye yakagadzirira. Ndinovimba ndizvo ndizvo haha ​​🙂
Chokwadi chinoshamisika nekureba kwenguva iyo bhatiri rei iphone 6 ios9 beta2 rinogara mangwanani ese uye 89% chokwadi icho chandafadzwa nacho, nezuro manheru 5% yebhatiri yakaiswa mumaseji ekuchengetedza uye wachi yealam yakandimutsa, ndinoziva kuti zvimwe vanhu vanoti zvinopesana. Ini ndinogovana ruzivo rwangu newe, handizive kana mumwe munhu achizoita zvakafanana. Kwaziwai!
Pindura kuna hrc1000
David velez akadaro
Kuwirirana neApple Watch kwakamira kundishandira. Ini ndagadzira fekitori wachi nekusagona kuwirirana zvakare. Ini ndaifanira kudzokera kuIOS 8.3 🙁
Pindura David Velez
Luis Emilio Osorio Pereira akadaro
Mhoro David Velez, chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri, iyo Bluetooth haishande mushe, saka haina kubatana zvakanaka kana haina kuita kudaro nechero mudziyo, kana ukayedza zvakare zvoitika zvakare, dzosera marongero enetiweki kubva iyo iPhone. uye utiudze
Pindura Luis Emilio Osorio Pereira
Rafael pazos akadaro
Mhoroi vakomana, ndiri kukunyorerai kubva kune iyo iPad mhepo 1 ine iOS 9 beta 2, ndinofanira kukuudza ruzivo rwangu neIOS 9 beta 2, inogutsa kwazvo, bhatiri rinogara kwandiri senguva dzose, ndinogona kutamba mitambo yakaita seGTA SAN ANDREAS KANA PASI PASI PEMATANK yatanga, Siri inotonhorera Zai, ndanga ndichitaura naSiri kweawa uye zviri nani chaizvo kupfuura iOS 8.3, iwo mafomu maviri panguva imwe chete akanyatsonaka, zvinyorwa zvakanyatsogadzirwa ndakave nenguva yakanaka yekupenda hahahaha, iyo nzvimbo nyowani inoenda nekukurumidza kunyangwe dzimwe nguva Zvakamuomera kuti aende, kudzokera kuchikumbiro chakadaro kwakaringana, iyo yekuchengetedza mamiriro haioneke pane yangu iPad kana ini handizive kuti iri kupi, ndakaitsvaga uye iyo haioneki, iyo kodhi-manhamba kodhi yakakwana, isa uye wotangazve iyo iPad uye inoenda kubva kune yakasarudzika, maonero angu pane iOS 6 inogutsa kwazvo ndinofunga ndichagara mubeta 9. Mugiredhi wandinopa ndi2 / 7, unoshaya zvinhu zvekupolish asi unogona kuwirirana zvakanaka, kwaziso
Yakadzika bhatiri modhi haicharatidzike, ndingaigadzirisa sei?
Haandibvumire kushandisa ID yekubata, izvo zvinoitika kune mumwe munhu? mu beta 1 kana yakashanda mushe iri iphone 6
Pindura kuna max
Rondedzero yetweaks inoenderana neiyo iOS 8.3 Jailbreak
Apple inoburitsa iOS 9 Beta 2 uye Tarisa OS 2 Beta 2